SMPTE Hollywood မှ National Hot Rod Association ၏ Rob Hedrick ကို“ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်” ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျင်းပမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE Hollywood သည် National Hot Rod Association ၏ Rob Hedrick ကို“ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်” ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျင်းပမည်
SMPTE Hollywood သည် National Hot Rod Association ၏ Rob Hedrick ကို“ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်” ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျင်းပမည်
Free event သည်ဆွဲအားပြိုင်ပွဲကို Fox Sports သို့သယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဝေးလံခေါင်သီသည့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလေ့လာလိမ့်မည်။
Los Angeles - အ ဟောလိဝုဒ် Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (များ၏ Society ၏ပုဒ်မSMPTE®)၊ National Hot Rod Association သည် Drag Racing ပြိုင်ပွဲ၏အကြီးကျယ်ဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုလုံခြုံစွာနှင့်လုံခြုံစွာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပုံကို“ Meet an Industry Innovator” ဝက်ဘ်ဆိုက်စီးရီးတွင်မည်သို့ပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည်ကိုဖော်ပြပါမည်။ အခမဲ့အစီအစဉ်ကိုစက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည်th.
COVID-19 ကြောင့်မတ်လတွင်ရွှေ့ဆိုင်းပြီးနောက် NHRA သည်ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လအတွင်း၌ Indianapolis Motor Speedway ၌အဖြစ်အပျက်သုံးခုနှင့်အတူပြိုင်ပွဲသို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ Fox မှအဖြစ်အပျက်များမှထုတ်လွှင့်သောရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် NHRA မှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောထုတ်လုပ်သူမှဒါရိုက်တာ Rob Hedrick နှင့် NHRA အသံလွှင့်အဖွဲ့သည်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုမြှင့်တင်ရန်ကြံစည်ခဲ့သည်။ Sony က, NewTek လူမှုရေးဝေးကွာသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီထုတ်လွှင့်ခြင်းအမှုထမ်းများအားဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် Grass Valley နည်းပညာနှင့် BeBop ၏ဝေးလံသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပလက်ဖောင်း။
NHRA တွင် Hedrick သည် Fox Sports နှင့်အသင်း၏ OTT ပလက်ဖောင်းအတွက်ရလဒ်များကိုဖန်တီးပေးသောအဖွဲ့တစ်ခုကို ဦး ဆောင်သည်။ အနှစ် ၂၀ ကျော်ရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံများဖြင့်သူသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်မှုကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည်။ ကက်ထရီနာဟာရီကိန်းအပါအဝင်သတင်းနှင့်မိုးလေဝသသတင်းများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်။ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးကတည်းကရောဘတ်သည်သူ၏တိုက်ခန်းကိုမြို့လယ်တွင်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည် Los Angeles မြို့ FOX ၏ရုပ်သံလွှင့်ဌာန NHRA ကိုအဝေးမှပံ့ပိုးရန်အွန်လိုင်းတည်းဖြတ်မှုအစုအဖွဲ့ထဲသို့ဝင်ရောက်သည်။
[VIZN] အတိုင်ပင်ခံ၏ကျောင်းအုပ်ကြီး Greg Ciaccio သည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ Ciaccio သည်နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကိုနှစ်သက်သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာနည်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် Sim, Ascent, Technicolor နှင့် Deluxe တို့တွင်အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် Technicolor ၏ DP Lights နှင့် Deluxe's ​​Mobilabs အနီးအနားရှိနေ့စဉ်သတင်းစာထုတ်ဝေမှုများအပါအ ၀ င်ရှေ့တန်းမှထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် ACC နှင့် Advanced Data Management ဆပ်ကော်မတီများပါ ၀ င်သည့် ASC Motion Imaging Technology Council ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကော်မတီ၏ဥက္ကChair္ဌအဖြစ်တာ ၀ န်ယူသည်။ ထို့အပြင်သူသည်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် SMPTE ဟောလိဝုဒ် အပိုင်း၊ ASC တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအသင်းတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်။
SMPTE ဟောလိဝုဒ်'' စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန် '' webinars သည်အများပြည်သူအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်
အဖြစ်အပျက်: SMPTE ဟောလိဝုဒ် စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန် အမျိုးသားလှံတံအသင်းသည်အစမှအဆုံးအော်ဟစ်သည်
ဘယ်တော့လဲ: ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာ 24, 2020. မွန်းတည့် PST
ယင်းအကြောင်း SMPTE® ဟောလိဝုဒ် အပိုင်း
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ SMPTE® အစပိုင်းတွင် 1928 အတွက်အနောက်ကမ်းခြေပုဒ်မအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် SMPTE တိုင်းဒေသကြီး, က 1,200 ထက်ပိုလွှမ်းခြုံ SMPTE သာ. ကွီးမွတျအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်နည်းပညာအတွက်ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်များ Los Angeles မြို့ ဧရိယာ။ အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မမှပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလစဉ်အခမဲ့အစည်းအဝေးများကမ်းလှမ်း SMPTE ရောနှောအဖွဲ့ဝင်များနှင့် Non-အဖွဲ့ဝင်များက။ အစည်းအဝေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးမှာပုဒ်မက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတင်ထားလျက်ရှိသည် www.smpte.org/hollywood.
အဆိုပါ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers®၏ Society က, ဒါမှမဟုတ် SMPTE, ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အနာဂတ် defining ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မစ်ရှင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်း, အနုပညာပညာရေးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မီဒီယာစေရန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူများ၏အကျိုးအတွက်နှင့်ခံစားဘို့အကြောင်းအရာကိုဖြန့်ဝေခွင့်ပြုသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမူဘောင်ကို enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာသမား, developer များနှင့်ဖန်တီးမှုများတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစေတနာ့ဝန်ထမ်း-မောင်းနှင်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်, SMPTE ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာများ၏အရည်အသွေးနှင့်ဆင့်ကဲကားမောင်းများတွင်ပါဝင်နေသည်။ အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုကုန်ကျ-ထိရောက်စွာသူတို့ရဲ့စျေးကွက်တိုးမြှင့်ကူညီစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်အဖွဲ့ဝင်များက '' အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်းကို support နှင့်ဆောင်ရွက်နေခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသိုင်းအဝိုင်းလှုံ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာပညာရေးထောက်ပံ့ပေးသည်။
ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE မှာရရှိနိုင် smpte.org/join.
Universal ထုတ်ဝေမှုထုတ်လုပ်ရေးဂီတသည်“ RE | COVERED” တံဆိပ်သစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ - စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အသံလွှင်း စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များ SMPTE အားကစား လုပ်ငန်းအသွားအလာ 2020-09-15
ယခင်: TAG သည်သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွင်နောက်ထပ်အဆင့်ထိရောက်မှုအတွက်အလိုက်သင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကိုထည့်သွင်းထားသည်
နောက်တစ်ခု: Apantac သည် OpenGear Platform အတွက် UHD Universal Scaler ကိုတင်ခဲ့သည်